Jumlada ck0640 Mini biraha gaangi nooca mashiinka qalabka mashiinka cnc lathe soo saaraha iyo alaab Lu Young
ck0640 Mini biro gaang nooca qalabka mashiinka mashiinka cnc lathe
Gawaarida ugu weyn waxaa taageera saxeexyada mobilada ee saxda ah ee saxnaanta wareega sare. Tilmaamaha hagaha mashiinka mashiinka wuxuu ka samaysan yahay bir bir ah oo u adkeysata dharka birta ah waxaana lagu sameeyaa daaweyn xad dhaaf ah oo badan oo maqal ah iyo daweyn dabiici ah oo gariir ah, taas oo damaanad qaadi karta saxnaanta joomatari ee qalabka mashiinka muddo dheer.
CK0640 saxsanaanta Sare Mini CNC Lathe
1. CK0640 wuxuu noqon karaa isuduwaha joogtada ah ee xasuusta kadib marka la helo awood, uma baahnid walwal haddii dadku ay udhaqaaqaan booska, waxay si isdaba joog ah u socodsiin kartaa kala bar qeybta shaqada.
2. Mashiinku badanaa wuxuu keenaa alaarmiga maxaa yeelay qalabkan, CK0640 wuxuu dejin karaa xadka jilicsan, si taasi u badbaadin karto waqtiga dayactirka mashiinka iyo qiimaha.
3. Sax sax ah, CK0640 isticmaal Absolute servo encoder waa 17 jajab.
4. Waxay ku habboon tahay wax soo saarka Mass ee gabal yar oo shaqo ah, Waxtarka sarreeya, saxsanaanta sare.
1. Fadlan ku xaqiiji danabyadaada deegaanka shaqaalaheena iibka intaadan dalban.
2. Fadlan noo sheeg shuruudahaaga mashiinka, ama sidoo kale waad noo soo diri kartaa alaabta sawirada, injineerkeenu wuxuu kaa caawin karaa inuu kuu doorto qaabka kuugu fiican.
Ugu badnaan sariirta dul lulid
Ugu badnaan kaxeynta gawaarida
Dhererka ugu badan ee qaybta shaqada
Jadwalka wareega socodka
Xawaaraha X-xawaaraha xawaaraha ku socda
Z- xawaaraha xawaaraha ku socda
8000 mm / daqiiqo
Heerarka quudinta dhidibka-X
1 ~ 2000mm / min
Heerarka quudinta Z-axis
1 ~ 1800mm / daqiiqo
Range of xawaaraha dunmiiqa
50 ~ 2500r galabnimo
X / Z-celiska axis (mm)
Xarumaha side qalabka
side qalabka aaladda gaangiska
Awooda mootada wadida weyn
Qiyaasaha guud (L × W × H)
Dhoofinta xirmada caadiga ah, cadeynta biyaha, ladagaalanka miridhka iyo fumigation-free.
Isticmaalka saldhigga birtu wuxuu leeyahay awood qaadasho wanaagsan.
Hore: SM325 qiimaha warshad cnc swiss nooca lathe machining ee 5axis
Xiga: VMC420 Shiinaha 3 mashiinka axdi qarameedka CNC biraha
TCK36 Shiinaha warshad qiimaha CNC CNC biraha sla jeestay ...
TCK630 Shiinaha CNC sariirta slant linen guide linen hab jidka lath ...